Cadaadis la saarayo bangiga Barclays - BBC Somali
Cadaadis la saarayo bangiga Barclays
7 Agoosto 2013
Image caption Qaar ka mid ah dadkii isugu soo baxay bannaanka hore ee guriga Raiisul Wasaaraha UK
Codsi ay saxiixeen in ka badan 25 kun oo qof ayaa maanta loo gudbiyay xafiiska Raiisul Wasaaraha Britain David Cameron, taasi oo loo codsanayo inuu bedbaadiyo shirkadaha xawaaladaha oo toddobaadka soo socda qaar badan oo ka mid ah uu Bangiga Barclays xiri doono akoonada ay ku leeyihiin.
Waxaa dadkaasi ay ka codsanayaan dowladda UK gaar ahaan Raiisul wasaaraha inay tallaabo deg deg ah ka qaaddo ama wax uun ka sameyso sidii looga dhaadhacsiin lahaa bangiga inuu ka laabto go'aanka uu qaatay ee uu ku xirayo akoonada shirakada xawaaladaha.
Arrintan waxa ay saameyneysaa in ka badan 250 xawaaladood oo caalami ah oo ay ku jiraan kuwa Soomaalida oo lacago looga diro dalkan UK, dalalka saboolka ah ee Afrika iyo Aisia.
Image caption Rushanara Cali waxa ay hoggaamineysay dadka gudbiyay codsiga
Dadka magaca ku leh bulshada ee gudbiyay codsiga waxaa hoggaaminaysay gabar xildhibaanad ah Rushanara Ali oo laga soo doorto xaafadda Bethnal Green iyo Bow ee bariga magaalada London.
Bangiga Barclays waxa uu sheegay in heyadaha lacagta qaarkood aanay lahayn nidaam sax oo lagu hubiyo falalka dambiyada, sidaa darteedna ay fududeyn karaan in lacago si aan sharci ahayn la isugu gudbiyo iyo in aragaxisada dhaqaale loogu diro.
Xawaaladaha ayaa dadka Soomaalida iyo dadyawga kale ee qaaradda Afrika iyo Asia waxaa ay qoysaskooda iyo ehelada kale ay sanad walba uga diraan lacag balaayiin dollar ah oo ay ku xiran tahay noloshooda dad malaayiin ah iyaguna.
Soomaaliya ayaana la sheegay inay tahay meesha ugu baahida badan dhinaca Lacagta Xawaaladaha la isugu diro.
Ma ahan markii ugu horreysay ee bangi uu qaato go'aankan oo kale, waxaa hadda ka hor isna bangi ku yaal dalka Mareykanka uu gaaray go'aankan oo kale, iyada oo dad badan oo Soomalida Mareykanka ah walaac ku abuurtay, laakiin markii danbe xal ku meel gaar ah ayaa loo helay.
Shirkadaha xawaaladaha ayaa iyaguna waxaa isticmaala hey'ada Qaramada Midoobay iyo kuwa samafalka.